Wafti uu horkacayo M/weyne Shariif, uuna ka mid yahay R/wasaare Farmaajo, oo gaaray Nairobi. – Radio Daljir
Wafti uu horkacayo M/weyne Shariif, uuna ka mid yahay R/wasaare Farmaajo, oo gaaray Nairobi.
Nairobi, May 24 – Wafti ballaaran oo uu hoggaaminayo M/weynaha dawladda federalka ah Sh. Shariif Sh. Axmed, uuna ka mid yahay R/wasaare Maxamed C/laahi Farmaajo, ayaa galabta ka dagey magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaas oo ay kaga qayb galayaan shirka uu soo qabanqaabiyey golaha ammaanka ee QM ee looga hadlayo xaaladda Somaliya.
Waxaa waftiga ka mid ah R/wasaare ku xigeenka ahna wasiirka qorshaynta C/wali Max?ed cali iyo guddoomiye ku xigeenka labaad ee barlamaanka Axmed Dhinbil Rooble iyo xubno kale oo ka tirsan xukuumadda iyo barlamaanka.
M/weyne Shariif iyo R/wasaare Farmaajo ayaa horay u qaadacay shirkii kan ka horreeyey ee wadatashiga ahaa ee lagu qabtay magaalada Nayroobi bartamihii bishii April ee sanadkan, kaas oo ay soo qabanqaabisay isla Qaramada Midoobey.
Waxaa sidoo kale maanta Narobi ka dagay wufuud ka kale socata Puntland, Somaliland, iyo Galmudug kuwaas oo dhammaantood ka qayb galaya shirkaasi looga hadlayo xaaladda kale guurka ah ee uu dalku hadda ku jiro. Waxaana shalay halkaasi tagay guddoomiyaha barlamaanka Sh. Xasan Sh. Adan oo isagu horay u sheegay in dalku M/weyneyaal badan yeelan doono haddii M/weyne Shariif uu doorashada diido.
Siyaasiyiin jooga magaalada Nayroobi ayaa idaacadda Daljir u sheegay in isla caawaba ay bilawdeen shirar gaar gaar ah oo ay yeelanayaan dhinacyada isku aragtida ka ah xaaladda Somaliya, laguna wado in shirku berri subax si rasmi ah u furmo.